WAX DHEEF ILAAHEY U QABAANE, WAX BARASHO MA LOO AWOODAA CIYAALKA BANAADIR? – War La Helaa Talo La Helaa
WAX DHEEF ILAAHEY U QABAANE, WAX BARASHO MA LOO AWOODAA CIYAALKA BANAADIR?
By madoobe	 On Feb 13, 2018
Waalid walbo wuxuu ku taamaa inta ay ubadkiisu yaryar yihiin in uu maalin uun arko iyagoo hana qaada, wax barta, misna
shaqo taga, si ay ugu illoobaan wixii rafaad ay lasoo mareen. Markii rajadoodu billowgii horaba isku hor gudbaan caqabado u saamixi waayo in ubadkoodu helaan aasaaska nololeed iyo kan wax barasho (dugsi hoose/dhexe), dantuna ku qasabto in ay caruurtu noqdaan dibad yaal aan haysan hooy iyo hu’ toona, ama qaarkood ay noqdaan derbiyo jiif dawarsata, waa yaab iyo amakaagba in waalidiintii lagu yiraahdo waxaan idiin fureynaa WAX BARASHO DADKA WAAWEEYN si loola dagaalamo JAHLIGA.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa billaabay barnaamijyo wax lagu baraayo dadka waaweyn, qaasatan haweenka. Waa wax wanaagsan in wax la baro dadka waaweyn (haweenka) maadaama wax barashadu tahay furaha nolosha. Waxaa is weydiin u baahanse, imisa caruur ah oo kasoo jeeda qoysas taag daran oonnan haysaninna wax barasho iyo noolli ku filan ayaa ku nool Gobolka Banaadir? Imisaase ku darxumeysan dariiqyada magaalada Muqdisho oo aanan la nooleyn waalidiintooda, una baahan daryeel dhan kasto ah? Boqolkiiba imisa ayaa aadda iskuulada, caruurta ku nool Gobolka Banaadir?
Tiro koob rasmi ah ma jiro oo aan soo xiganaayo, haddaanse qiyaaso inta aanan tagin iskuulada, kama yara 80%. Haddaba yaa mudan in la siiyo fursado wax barasho, caruurta mise waayeelka? Macquul ma tahay in hooyadu tagto iskuul iyadoo ubadkeedu guriga hortiisa giraangar ku kaxeynayo maalin barqo ah iyagoo bilaa iskuul ah. Jawaabaha iisoo baxay kulligood waa kuwo aan wanaagsaneyn.
Waxaan rabaa in aan talo ku darsado madaxda iyo maamulka guud ahaanba. Reer Banaadir waxeey dhahaan canjeero sideey u kala korreeyso ayaa loo kala qaadaa, ama aan si kale u dhigo,, oodo dhacan sideey u kala korreeyaan ayaa loo kala qaadaa.
Ma xuma in haweenka iyo dadka waaweyn oo dhami wax la baro laakiin waxaa ka horreysa in caruurtoodu haystaan wax barasho. Mise iyaguna waxeey sugayaan inta ay ka weynaadaan oo markaasna ay tiro aad u yar helaan fursadahaan oo kale. Waxaan soo jeedinayaa, walibana aan codsanaayaa in xoogga iyo xoolahaba la galiyo caruurta. Jahligana markaas ayaa laga guuleysan karaa.
OMAR ABDULLAAHI OMAR
Cabdullaahi Mohamed Cabdullaahi Geedi (Shadoor) oo ku guuleystay Musharaxnimada GOTEBORG SWEDEN